6 Tekinoroji Trends mu2020 Marita ese Anofanirwa Kuziva Nezve | Martech Zone
Haisi chakavanzika chekuti kushambadzira mafambiro anomuka neshanduko uye nehunyanzvi muhunyanzvi. Kana iwe uchida kuti bhizinesi rako rimire, uunze vatengi vatsva uye wedzera kuoneka pamhepo, iwe uchafanirwa kushingairira nezvekuchinja kwetekinoroji.
Funga nezvetekinoroji maitiro munzira mbiri (uye yako mindset ichaita mutsauko pakati pekubudirira mushandirapamwe nemakiriketi mune yako analytics):
Chero kutora matanho ekudzidza maitiro uye kuashandisa, kana kusara kumashure.
Muchikamu chino, iwe unozodzidza nezve matanhatu matsva tekinoroji mafashoni ari kumusoro kwe2020. Wagadzirira kuvhura? Heano mazano uye maturusi auchazoda kurova pasi kumhanya gore rino.
Maitiro 1: Omnichannel Kushambadzira haichisiri Yokusarudzika, Zvakakosha
Kusvika parizvino, vatengesi vakave nekubudirira kutarisa kune mashoma masocial chiteshi kutumira uye kuita pa. Nehurombo, izvi hazvichisiri izvo muna 2020. Semushambadziri webhizinesi, hauna nguva yekutumira zvemukati papuratifomu yega yega. Panzvimbo pekugadzira zvemukati zvega zvega chiteshi, unogona repurpose zvemukati ndokutumira panzira yega yega. Izvi hazvingosimbise yako mameseji mameseji, asi zvichaita kuti bhizinesi rako rikoshe uye riite pamwe nenharaunda yako yepamhepo.
Omnichannel kushambadzira inogonesa yako pamwe chete vateereri kushanyira chiteshi chako mushe. Zvakaguma nei?
Kutengesa-nzira-nzira yekutengesa inokwana madhora zviuru zviviri zvemadhora.
Wakagadzirira kuona omnichannel kushambadzira muchiito? Tarisa uone kuti mukuru sei mutengesi weUS, Nordstrom, inoshandisa kushambadzira-chiteshi kushambadzira:
Iyo Nordstrom Pinterest, Instagram, uye Facebook maakaunti ese ane zvinodzvanya zvigadzirwa zvigadzirwa uye dhizaini kurudziro.
Kana vanhu vatarisa chero maNordstrom's social media account, ivo vanogona kutenga zvinyorwa zvinovatungamira kune iyo Nordstrom webhusaiti.
Kana vangosvika panzvimbo iyi, vanogona kuronga dhizaini, kurodha pasi Nordstrom app, uye kuwana mukana wekuvimbika mibairo chirongwa.
Omnichannel kushambadzira kunoisa mutengi mune inoyerera kutenderera yezviri mukati, vatengi, kutengesa, uye mibairo.
Meseji ine ruzha uye yakajeka:
Muna 2020, iwe unofanirwa kutarisa pane omnichannel kushambadzira. Iko kusimuka kwekushambadzira kwedhijitari uye vezvenhau vehukama kwagadzira kudiwa kwea automated kushambadzira maturusi. Kutaura chokwadi, varidzi vebhizinesi uye vashambadzi havana nguva yekutumira zuva rega rega kune akawanda mapuratifomu.
Pinda: Zvemukati kugadzira, kushandura saizi uye kushambadzira maturusi kubva PosterMyWall. Kwete chete iwe unogona kugadzira zvemukati, asi iwe unogona kuzvisarudzira kune akasiyana madhivhuru senge Instagram zvinyorwa kana Facebook yakagovaniswa mifananidzo mune imwe kuenda. Bhonasi? Ndezvemahara. Asi hazvina kukwana kungogadzira zvemukati, iwe unoda kuzvitsikisa zvakare.
Kuti uchengetedze nguva, batch yako yemukati yekugadzira uye yekutsikisa mabasa pamwechete. Mukugara kumwe chete, unogona kugadzira zvirimo zvinoonekwa uye wozvironga kuti ubudise pachena kune yega yega chiteshi. Nekugadzirisa saizi dhizaini pakuenda uye otomatiki-kutsikisa zvirimo neyakareruka mbeva-tinya, iwe unochengetedza nguva, mari uye chengetedza yako brand kuti ienderane.
Omnichannel kushambadzira kunoenzana nekusimba pamhepo, uye ndiyo 2020 tech shanduko yausingakwanise kuregeredza.
Maitiro 2: Ramangwana reKutengesa kweVhidhiyo
Vhidhiyo kushambadzira izita remazwi munguva pfupi yapfuura, asi zvine kukosha kwese here? Tichifunga kuti inopfuura hafu yevanhu vari pamhepo vanoona mavhidhiyo zuva rega rega, zvinoenderana nevhidhiyo yekushambadzira manhamba kubva HubSpot, Ndingati zvinonzwika ehe. Ndeapi mhando yezvinyorwa zviri kutariswa nevanhu? Youtube haisisiri kutonga seFacebook vhidhiyo kushambadzira, Instagram Nhau uye Live ririmukurumbira.
The kiyi yekubudirira kwevhidhiyo kushambadzira ndeyako kuita. Vanhu havachafarire kutarisa yakakwenenzverwa, akavharidzirwa mavhidhiyo zvakare. Pane kudaro, vanoshuvira zvemukati zvevhidhiyo zvinoenderana nezvavanofarira. Kuruma-saizi mavhidhiyo ndiyo nzira huru yekubatana nevateereri vako uye nekugovana padhuze nepedyo yechiratidzo chako.
Uye usazvidya moyo, haudi nyanzvi yevhidhiyo yekugadzira inoenderana yevhidhiyo zvemukati. Iwe unogona nyore nyore kugadzira akakodzera uye anokanganisa mavhidhiyo kubva pakutanga, kana kubva mavhidhiyo matemplate muPosterMyWall. Gadzira mavhidhiyo ekugadzirisa yako mameseji meseji, kusimudzira chigadzirwa kuvhura kana kuzivisa vateereri vako nezvekambani nhau.
Heano Maitiro Akapusa PosterMyWall Is:
Bhurawuza matemplate evhidhiyo kuti uwane imwe inokodzera toni uye meseji yechako
Dzvanya pane dhizaini kuti ushandise iyo template
Shandisa mupepeti kugadzirisa nyore nyore kopi, mavara, mafonti uye dhizaini
Goverana vhidhiyo yakanangana neako masocial chiteshi kubva kuPosterMyWall
Mune matanho mana chete akareruka, iwe une vhidhiyo yakamisikidzwa yekugovana! Nepfupi, inobata vhidhiyo zvemukati, unozvichengeta uri pamberi pevateereri vako, uye ndiyo nzvimbo yakanaka kuve.
Maitiro 3: Gadzira Zvigadzirwa Zvinowanikwa MuGoogle Musika
Shanduko nyowani yehunyanzvi yanga iri musoro wekupokana kukuru kwevatengesi: kusundira zvigadzirwa kuGoogle Musika. Vapikisi vanopokana kuti vakaisa mari yakati kurei mukuvaka inonakidza webhusaiti inoratidza yavo bhizinesi 'kuzivisa uye kuzivikanwa. Kusundira zvigadzirwa kuGoogle kunobvisa mukana wekuti vashanyi vashamiswe nenzvimbo yavo yakarongedzwa zvakakwana. Zvakaguma nei? Kudonha kwakakosha muwebhu traffic.
Iwe unofanirwa kutarisa kupfuura iyi metric kuti uone iwo mukuru mufananidzo pano. Iwe unoda here kutengesa? Kana iwe unoda kuve neiyo yakanyanya-yakashanyirwa webhusaiti? Ehezve, iwe unoda kutengesa, asi iwe hauna imwechete-yekutengesa, iwe unoda kudzokorora, vakavimbika vatengi, ndosaka iwe wakagadzira iyo yakanaka webhusaiti, handiti? Rudyi.
Panzvimbo yekutora Google Marketplace sekufa kwewebhusaiti yako, funga nezvayo seimwe chiteshi kuunza ruzivo kune yako brand. Nepo mamwe mabhureki achishushikana netarisiro yekusundidzira zvigadzirwa kuGoogle uye kurasikirwa nemigwagwa, unogona kusvetukira mukati uye kunyora zvigadzirwa zvako, kutenga kutengesa, uye kukura zita rako.
Icho chokwadi chekuti iwe unogona kunyora zvigadzirwa zvako kuti utengese kuburikidza neGoogle mumaminetsi mashoma zvinoita kuti ive nyore (uye yemahara!) Yekushambadzira chishandiso iwe yausingakwanise kufuratira.
Heano maitiro aunogona kuzviita:
Kutanga, tungamira kune yako Google Bhizinesi Bhizinesi Akaundi, kwaunogona kunyora zvigadzirwa zvako, zvigadzirwa, kuwedzera mifananidzo uye kutanga kutengesa mukati memaminitsi. Ehezve, iwe uchazoda kusimbisa rako rezwi izwi, mameseji uye maraki kubva kuwebsite yako uye pasocial media chiteshi. Zvinoreva, iwe haudi kukanda hodgepodge yezvakashata zvigadzirwa zvinyorwa kumusoro. Tora Google Marketplace zvakafanana nezvaungaita kuchitoro chako chepamhepo uye isa kufunga mumifananidzo, kuteedzera uye tsananguro yechigadzirwa.
Maitiro 4: SERPS Favor Schema Markups uye akapfuma Snippets
Kushambadzira kwedhijitari kuri pasina mubvunzo kunovimba neSEO (Tsvaga Injini Kugonesa). Muna 2020, iwe unozofanirwa kuita zvinopfuura kusarudza target keywords uye shandisa mufananidzo alt zvinyorwa kuunza muwebhu traffic. Ehe, iwe uchiri kuda kushandisa SEO yakanakisa maitiro, asi iwe zvino uchafanirwa kuitora iyo nhanho kumberi uye kugadzira akapfuma snippets neSchema Markups.
Yakafuma snippet ine microdata, inonzi Schema markup, iyo inonyatso kuudza injini dzekutsvaga kuti peji rega rewebhu nderei. Semuenzaniso, kana iwe ukapinda "kofi inogadzira" mubhawa reGoogle rekutsvaga, ndeipi yemhedzisiro iyi yaunofunga kuti vanhu vangangobaya pa:
Tsananguro yakajeka yechigadzirwa, mutengo, chiyero chevatengi, uye ongororo
Tsananguro isina kujeka yemeta yakadhonza zvisina kurongeka kubva papeji, hapana chiyero, hapana mutengo, hapana ruzivo
Kana iwe wafungidzira yekutanga sarudzo, iwe uri pachokwadi. Muna 2020, ese makuru mainjini ekutsvaga, anosanganisira Google neYahoo!, Vanoziva schema markups uye akapfuma snippets kana uchidhonza up SERPs (Tsvaga Injini Mhedzisiro Mapeji).
Chii chaungaite? Iwe une sarudzo mbiri: shandisa Schema.org kugadzira ruzha rwemashoko, kana kutora mukana we ichi chishandiso chemahara kubva kuGoogle. Ikozvino, peji rega rega rezvigadzirwa rizere neruzivo rwakanangana, izvo zvinowedzera kuoneka kwebhizinesi rako.
Trend 5: AI ichagadzirisa Hyper-Personalization
Inonzwika senge oxymoron? Nenzira, ndizvo, asi izvo hazvideredze kukosha kwayo. Kana isu tichikurukura zvemunhu munzvimbo yekutengesa, tiri kuongorora nzira dzekupa ruzivo rwakasarudzika kumutengi.
Rega ndive akajeka: AI haizogumisi hunhu kana ikashandiswa nemazvo. Panzvimbo iyoyo, zvinobatsira nekugadzira yakasarudzika uye yakanaka ruzivo rwevatengi ruzivo. Mushure mezvose, vatengi vaneta neasingaiti midhiya. Paunofunga nezve chokwadi chekuti ubiquitous midhiya inovafukidza ne Zviuru zvishanu pazuva, zviri nyore kuona kuti nei vakaneta. Panzvimbo pekuwedzera kune ruzha, unogona neunyanzvi kushandisa AI kugadzirisa ruzivo rwakasarudzika.
Ne shanduko muhunyanzvi uye kuwanda kweAI software, vatengesi vanogona kuwana vatengi vavo padanho repedyo. Imwe yedzakanakisa nzira iwe yaunogona kushandisa AI kuti uwane yako ndeyako kuunganidza data nezve izvo zvemukati zvavanofarira.
Nyatsoongorora yako webhusaiti analytics uye zvemagariro enhau nzwisiso. Ndeapi mapatani anobuda? Wakagadzira vatengi manas kuti vagadzire mabhenji uye mifananidzo iyo inotaura navo. Zvakadaro, izvo hazvikwani kana iwe uchida chaiyo brand-kune-vatengi kubatana.
Ndosaka mabhii makuru ari kushandisa AI nekuti nayo…
Netflix inogona kufanotaura izvo mushandisi wega wega anoda kutarisa zvichienderana nenhoroondo yavo.
Pasi peArmor vanogadzira regimen yehutano inoenderana nevashandisi kudya, kurara uye hutano maitiro.
Chatbots dzinogona kubvunza vashanyi pane yako Facebook peji Peji kana vachida rubatsiro kuti vawane chimwe chigadzirwa kana sevhisi.
Pazasi mutsara: kuwana hyper-pachako nevatengi vako mu2020, iwe unozoda rubatsiro diki kubva kuAI.
Maitiro 6: Kutsvaga kwezwi hakuzotsiva zviripo zvinoonekwa
Iko kukwira kwekutsvaga kwezwi kune vashambadziri vakawanda-vanoshandura zvinoverengeka zvemukati kuita izwi fomati yekutsvaga injini. Kutsvaga kwezwi chiitiko pane radar yemunhu wese, uye nenzira kwayo kudaro:
Hafu yekutsvaga ichaitwa kuburikidza nekutsvaga kwezwi mu2020.
Pamwe iri zano rakanaka kuisa pfungwa dzako pakutsvaga kwezwi, asi mukuita kudaro, usaite mhosho yekufunga kuti zvirimo zvinoonekwa chingwa chemasikati. Muchokwadi, zvakapesana chaizvo. Unoda humbowo here? Inonzi Instagram, uye yave nayo 1 bhiriyoni mwedzi wakashanda vanoshandisa kubva muna Ndira 2020.
Vanhu vasingarambike vanoda zvinoonekwa zvemukati. Sei vaisadaro? Nezviratidzwa, vanogona:
Dzidza hunyanzvi kana ruzivo rwakanangana nezvavanofarira
Edza mabikirwo matsva kana kugadzira hunyanzvi nehunyanzvi
Tarisa mavhidhiyo anovaraidza uye anodzidzisa
Tsvaga zvigadzirwa zvitsva uye zvigadzirwa
Nepo kukosha kwekushambadzira kwekuona kusiri iko kwakanyatso shanduka mu2020, kusvika kwemazano matsva kunogona kuyedza vashambadzi kure nekugadzira zvirimo zvinoonekwa. Izvi zvinonzwisisika zvichave zvinokuvadza. Ndosaka zvichinyanya kukosha kuisa zvakasarudzika zvemukati zvemukati mune ako ese nzira yekushambadzira.
Kuti ikubatsire, PosterMyWall yakazara-yakazara nemufananidzo makiraibhurari, mavhidhiyo matemplate, uye zviuru zve matemplate akagadzirwa zvine hunyanzvi. Neiyi yemahara dhizaini software, unogona kugadzirisa matemplate nekuchinja zvinyorwa, mavara uye mifananidzo kuti ifanane neyako branding. Kana, iwe unogona kugadzira vezvenhau zvinyorwa, blog blogry, yakagadzirirwa chigadzirwa mifananidzo uye yekushambadzira zvinhu kubva pakutanga neiri nyore-kushandisa-yekugadzirisa software.
Usakanganwa kudzokororazve izvo zvinoonekwa kuti zvipikirire yako omnichannel kushambadzira. Semuenzaniso, iwe unogona kugadzira blog post musoro uye kuisazve iwo muPinterest pini kana Instagram posvo uye voila, iwe une zvinoshamisa zvinoonekwa zvemukati zvemazhinji chiteshi!
Ita Tech Shanduko Kushandira Iwe
Muna 2020, iwe unozofanirwa kukanda mambure akawandisa kuti uunze vatengi, kuvaka chiziviso chiziviso uye kukura bhizinesi rako. Kuti uite izvozvo, zvakakosha kuti ugare wakachinjika uye pamberi pemaitiro. Kiyi yekushambadzira zvemukati kushanduka, sevashambadzi vanoshora kuchinja njodzi musika uchichinja pasina ivo. Kunyanya kuvhurika uye kuita kwekuti iwe uve wehunyanzvi shanduko, zvirinani kuti uzvishandise iwe mukana wako. Uye kana uchidaro? Zvakanaka, hapana kumira iwe!
Tags: kushambadzira maitiroomnichannelzvigadzirwa zvetekinorojiMaitiro
Christina Lyon munyori, blogger uye muimbi kubva kuzuva SoCal. Ari pamoto wekubatsira mabhizinesi epamhepo kukura nekopi yekushambadzira. Paanosimuka kubva padhesiki rake, Christina anofarira kuverenga ngano, kufamba-famba pamhenderekedzo uye kutamba mimhanzi.